Matt သားရေထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Rongqi
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > သားရေတု > Matt Leathers
ဒီ Matt Matt သားရေတစ်လောကလုံးအနက်ရောင်လူကြိုက်များ High-end, အခြားအရောင်အရည်အသွေးလိုအပ်ချက်များကိုမှာယူနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏တရုတ်နိုင်ငံတွင်သင်၏ရေရှည်မိတ်ဖက်ဖြစ်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
အစက်အပြောက် Matte Mist Surface ချောမွေ့သောအနက်ရောင် Matt Matts Pvc စာရွက်စာတမ်းစာရေးကိရိယာများသားရေမိတ်ကပ်လက်ကိုင်အိတ်သားရေသားရေ Duffle အိတ်
PVC Matte သားရေနူးညံ့သိမ်မွေ့သောခံစားမှု၊ ထိုးထားသည့်အောက်ခြေ။
ကုန်ပစ္စည်းများ Wine box အတွက် box, makeup box, notebook, album စသည်ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ကွဲပြားခြားနားသောအလွှာများအတွက်ထုတ်ကုန်စွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ, "အောက်အထည်" အမျိုးမျိုးသောချုပ်ထားသောအထည်, အထည်မဟုတ်သောအထည်, သိုးမွှေး, elastic အထည်အမျိုးမျိုးသတ်မှတ်ချက်များ။ "အထူးညွှန်ကြားချက်များ" ကိုဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်ပုံစံအရအရောင်၊ အက်ဆစ်ခုခံမှု၊ အယ်လကာလီခံနိုင်ရည်၊ အရည်ပျော်ပစ္စည်းနှင့်အခြားမတူညီသောလိုအပ်ချက်များ
၁၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေး PVC သားရေ (ခဲ၊ ပ၊ အကြီးစားသတ္တု၊ PH တန်ဖိုး၊ Phthalates; Organo tin ဒြပ်ပေါင်းများ၊ APEO, DEMP Pass ကိုဥရောပသမဂ္ဂနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများ)
၂၊ လက်အိတ်အရေပြား (၀ တ်ဆင်နိုင်သောခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ဆန့်ကျင်ခြင်း၊ Anti-static)
၃၊ မာကြောသောသားရေ (အပူချိန်နိမ့်ခြင်းနှင့်လှည့်ခြင်း၊ အနုတ် ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လိမ်ပြီးလှည့်ပြီး 3000 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်သို့လှည့်)
၄။ မီးလျှံတားသောပantibိဇီဝပစ္စည်းများ (မီးလျှံတားဆေးသက်ရောက်မှု <၅ စက္ကန့်၊ မီးလျှံတားဆေး <၅ စက္ကန့်၊ မီးလျှံနောက်ပြန် <8 စက္ကန့်) ကိုရရှိနိုင်သည်။
၅။ ရေစိုခံနိုင်သော permeable PVC (ရေခုခံနိုင်မှု - FZ / T01004.1991; 3000.1000MMH20 ရေကော်လံ; ရေခံနိုင်သောရေ၊ Bw စမ်းသပ်နိုင်မှု၊ 3000. 7000g // ၂၄ နာရီ)
၆။ ၀ တ်ဆင်နိုင်သောခံနိုင်ရည်ရှိသော၊ ခံနိုင်ရည်ရှိသောရေစိုခံသောပိတ်ထည်များ (၀ တ်ဆင်နိုင်သော၊ အက်ဆစ်ခံနိုင်ရည်၊ အယ်လကာလီခံနိုင်ရည်၊ အကျင့်ပျက်သော၊ ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊
၇။ စာရွက်စာတမ်းသားရေ (ခြစ်ခြစ်ခြင်းနှင့် ၀ တ်ဆင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ) ရေစိုခံပုံနှိပ်ခြင်း၊ အပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
_—တင်ပို့မည့်အစီအစဉ်ကိုငွေပေးချေပြီး ၁၅ ရက်အတွင်းစီစဉ်ပေးပါမည်
_—အခြေခံစျေးနှုန်းအားလုံးတွင်အခွန်များမပါ ၀ င်ဘဲ ၇ ဆင့်အထိအခွန်လိုအပ်သည်။ ငွေတောင်းခံလွှာမတိုင်မီငွေပမာဏသည် RMB ၁၀,၀၀၀ ထက်ကျော်လွန်ပါကအများပြည်သူလွှဲပြောင်းရန်လိုအပ်သည်။
တင်ပို့မည့်အစီအစဉ်ကိုငွေပေးချေပြီး ၁၅ ရက်အတွင်းစီစဉ်ပေးပါမည် and we will arrange the shipment as soon as possible. By default, FedEx specifies that other couriers can contact customer service to change the shipping difference. The default shipping cost may beabit wrong, if there is an error, after submitting the order passenger service will change the shipping cost according to the weight and region inatimely manner, there isaproblem can directly contact the customer service.
hot Tags:: Matt Leathers, ပေးသွင်းသူများ, တရုတ်, အထူးလျှော့စျေး၊ အရည်အသွေး၊ ဖန်စီ